Izigelekeqe zishaye utshani namabhokisi omngcwabo - Ilanga News
Home Izindaba Izigelekeqe zishaye utshani namabhokisi omngcwabo
Izigelekeqe zishaye utshani namabhokisi omngcwabo
Izigebengu zingene ngewindi, zantshontsha amabhokisi angaphezu kuka-10 omngcwabo nefriji
ASALE ekhamisile amashalofu okugcinwa kuwona amabhokisi okungcwaba eMaritzburg Funeral Parlour, egatsheni laseMpendle, okugasele izigebengu zazibuthela amabhokisi
KUDUMA ikhanda kumnikazi wenkampani yabangcwabi eMpendle, okugasele abantu abangaziwa emakhazeni akhe ebusuku ngeSonto, bantshontsha amabhokisi okungcwaba angaphezu kwawu-10 kuhlanganisa nabiza imali enkulu. UMnu Nhlakanipho Makhathini, weMaritzburg Funeral Parlour, uthi kusenzima ukuqagula ukuthi mungakanani umonakalo odaleke emakhazeni akhe egatsheni laseMpendle, kade kugasela abantu ebusuku bantshontsha amabhokisi baze bathatha nolunye uhlobo lwesiqandisi esigcina abantu abashonile, oluyisipesheli abelusebenzisa njengoba kubuye kuphele ugesi.
Ekhuluma neLANGA uMnu Makhathini, uthe kube wumzuzu onzima ngesikhathi etshelwa yizisebenzi ngoMsombuluko ebezizovula emahhovisini aseMpendle, zimazisa ukuthi kugqekeziwe emakhazeni, kwathathwa amabhokisi. “Ungifonela nje mfowethu ngisendleleni ngisayobheka ukuthi mungakanani umonakalo odalekile. Kusenzima ukuqagula ukuthi izimpahla ezithathiwe kungaba ngezamalini. “Ngididekile kuyimanje njengoba kuthathwe nohlobo lwamanye amabhokisi okungelenani lika-R28 000. Kunesinye isiqandisi engikhala ngaso esithathiwe, ebesiwusizo kakhulu emakhazeni.
“Umsebenzi sesiwushiyele emaphoyiseni ukuthungatha abantu abazotholakala namabhokisi okungcwaba ebiwe,” kusho yena.ILANGA lithole ukuthi uNkz Lungile Nhlabathi, oyisisebenzi saseMaritzburg Funeral Parlour egatsheni laseMpendle, nguyena ofike kuqala wabona ukuthi kugqekeziwe emakhazeni. Uthe: “Kangiwakholwanga amehlo ami ngento engiyibonile ngesikhathi ngivula emnyango, ngiqale ngathuswa wukubona engekho amabhokisi lawa okukhangiswe ngawo ehhovisi. “Kuthe uma sengingaphakathi, sengibheka kahle, ngabona ukuthi izigebengu zivule ifasitela elikhulu eliseceleni okuyilona okukhishwe kulona amabhokisi. “Ngibikele umphathi omkhulu wamakhaza eMgungundlovu, uMnu Makhathini, ngimazisa ngokugqekezwa kwamakhaza akhe,” echaza. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLieutenant Colonel Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko. “Amaphoyisa aseMpendle asevule idokodo ngokugqekezwa kwamakhaza asendaweni ngeSonto, lapho kuthathwe khona amabho-kisi eqile eshumini namakho-mpyutha okusebenza. Bekunga-kaboshwa muntu, amaphoyisa asaqhubeka nophenyo,” esho.
Previous articleUthishanhloko uboshwe elaliswe esibhedlela sabagula ngengqondo
Next articleUdalula imfihlo yesnemfu onqobe izigidi kwiBig Brother